यसरी बदल्न सकिन्छ मानव मस्तिष्कलाई...... - Health Today Nepal
यसरी बदल्न सकिन्छ मानव मस्तिष्कलाई……
September 14th, 2019 स्वास्थ्य विशेष0comments
के हामी विभिन्न सूक्ष्म तार र हार्डवेयर मिलेर बनेको कम्प्युटर जस्तै हाड र नसा मिलेर बनेको यन्त्र हौं ? कम्प्युटरको सफ्टवेयर परिवर्तन गरेजस्तै सञ्चालन भइरहेका मस्तिष्कका तन्तुलाई परिवर्तन गरी त्यसलाई पुनः ताजा बनाएर प्रयोग गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं होला ? यदि परिवर्तन गर्न सक्दैनौं भने के हाम्रो भाग्यमा जे लेखिएको छ, त्यही पूर्वनिर्धारित जीवन लिएर जन्मेका हौं त ? अथवा हामी मस्तिष्कका तन्तुलाई बदलेर पुनर्गठन गर्दै त्यसलार्ई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कुनै लक्ष्य निर्धारण गरी चाहेअनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न पो सक्छौं कि ?
क्रिच्लोले लन्डनका ट्याक्सी ड्राइभरको एक उदाहरण दिएका छन् । लन्डनका ट्याक्सी ड्राइभरमाथि भएको अनुसन्धानबाट मस्तिष्कसम्बन्धी यस्तो तथ्य फेला पर्यो । लन्डनमा यदि ट्याक्सीका ग्राहकले आफ्नो गन्तव्यमा छोटो बाटोबाट जाने आदेश दिएमा ट्याक्सी चालकले लन्डनका सबै बाटोलाई राम्ररी सम्झेको हुनुपर्छ । यी सबै बाटो थाहा पाउन दुईदेखि चार वर्ष लाग्ने ट्याक्सी ड्राइभरहरुको भनाइ छ ।
संज्ञानात्मक व्यावहारिक चिकित्साले हाम्रो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै हामीले सोच्ने र व्यवहार गर्ने तरिकालाई बदल्न सक्छ । जब हामीले हाम्रो जीवनका अनुुभूतिबारे फरक तरिकाले सोच्ने प्रक्रिया सिक्छौं, यस्ता मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाले पक्कै पनि मस्तिष्कको बनावट र अवयवमा असर पुर्याउँछन् ।‘न्युरोप्लास्टिसिटीको शक्ति भन्नाले हाम्रो मस्तिष्कमा रहेको उपचार हुन सक्ने विशेष क्षमता नै हो,’ बेग्लेले भनेका छन् ।
वंशाणुगत गुणले नै व्यक्तित्वलाई छुट्याउँछ भन्ने मान्यता छ । उदाहरणका लागि हाम्रो व्यवहार हाम्रो व्यक्तिगत क्रोमोजोममा आधारित हुन्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता छ । जेन्डर्ड ब्रेनकी लेखिका मस्तिष्कविशेषज्ञ जिना रिप्पोन महिला र पुरुषको मस्तिष्क फरक हुन्छ भन्ने अवधारणालाई अस्वीकार गर्छिन् । मस्तिष्क विश्वकै सबैभन्दा सक्रिय पदार्थमध्ये एक हो जसको कारण नै हामीले यो क्षणक्षणमा परिवर्तन भइरहने संसारलाई अनुभूति गर्न सकेका छौं । मस्तिष्कमा संसारको प्रभाव हामीले सोचेभन्दा धेरै पर्दछ । यसले वंशाणुगत गुणभन्दा पनि विश्वको प्रभावले मस्तिष्कमा लैंगिक धारणा आउने पुष्टि गर्छ ।
प्लास्टिसिटीको अवधारणाले मानव मस्तिष्कलाई परिवर्तन गर्न सकिने र यसलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि माध्यम बनाउन सकिने आशा देखिएको छ । हाल मानिस वयस्क हुँदै गएपछि उसको मस्तिष्क पनि वयस्क हुने र मस्तिष्कको विकास रोकिने जुन मान्यता थियो, त्यसलाई यस अवधारणाले खण्डित गर्दछ । रिप्पोन भन्छिन्,‘बालबालिकाको मस्तिष्क खाली पानाजस्तै हो । यो पूर्वनिर्धारित लक्ष्य र वंशाणुगत गुणबाट टाढा हुन्छ ।’
हाम्रो मस्तिष्क हरेक दिन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । हरेक समय हामी केही नयाँ सिकिरहेका हुन्छौं, नयाँ विचार गरिरहेका हुन्छौं । मस्तिष्कमा नयाँ सम्बन्ध, नयाँ आकार बनिरहेको हुन्छ । इन्नेटका लेखक तथा न्युरोजेनेटिसिस्ट केभिन मिचेलको विश्वास छ कि मस्तिष्कमा हुने परिवर्तन निकै सूक्ष्म हुन्छ । एक सूक्ष्म तहमा हुने परिवर्तनले नै हाम्रो व्यक्तित्व परिवर्तन गर्दछ । हामीले मस्तिष्कमा धेरै श्रव्य र दृश्य राखेका हुन्छौं, तर ती सबै समायोजन हुँदैनन् भन्छन् मिचेल ।‘यदि हामीले प्रयोग गरिरहेका मस्तिष्कका पाटाहरु हरेक समय हामीले देखेका सुनेका स्मृतिसँगै ठूलो हुँदै जाने हो भने हाम्रो शिर एक दिन पड्किनुपर्ने थियो, तर यस्तो हुँदैन,’ उनले भने ।
केभिनले भने मस्तिष्क निर्माणसम्बन्धी मध्य मार्गलाई स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार मस्तिष्क निर्माणका लागि वंशाणु र वातावरण, व्यक्तिको प्रकृति र पोषण, प्रयास र भाग्य सबै नै कारण हुन् । यी सबै एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित भएर नै मस्तिष्कको विकास हुन्छ । र यो प्रक्रिया आजीवन रहन्छ । हाम्रा व्यक्तिगत छनोटले नै हाम्रो आधुनिक जीवनको रचना गरेको हुन्छ । हामीले जे बानी बनाएका हुन्छौं, त्यसको अनुभवले नै हाम्रा हरेक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले वंशाणुगत गुण र हाम्रो अनुभूति दुवैको नै हाम्रो मस्तिष्कमा प्रभाव रहेको हुन्छ । दुवै मिलेर नै हाम्रो मस्तिष्कलाई आकार दिन्छन् । हाम्रो जीवनभरको क्रियाकलापबाट दुवैले नै हाम्रो व्यक्तित्वलाई पुष्ट गरिरहेका हुन्छन् ।
Previous article डेङ्गु नियन्त्रणका लागि भारतको विधि नेपालमा चलाउन माग
Next article मानसिक रोग विज्ञ डा. शर्माको ‘मान्छेको मन’ सार्वजनिक